GL 55% အလူဇင့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသောစတီအမိုးပြား
စက်မှု့ လုပ်ငန်း နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်သုံး လက်အိတ် ( safety glove )
Classic Roof Tile အပူခံအမိုးပြားများ
SCG Elabana ကွန်ကရစ် အမိုး
PVC Wall Panel, နံရံကပ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 102866 view counts
Concrete column ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်များ
Brand : MST
Model : MST
လုပျငနျးအမညျ : Mate Swe Taw Concrete Hollow Pole’s Construction and Engineering Company Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01 68 67 84, 09 51 52 92 82, 09 25 45 12221
Product Name : Hollow Concrete Poles
အသုံးပြုသောနေရာ : Power Transmission
အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများ : Cement and reinforcing steel
ပုံသဏ္ဏန် : Customize
အမျိုးအစား : Partial Prestressed
Nature : Hard
သွင်ပြင် လက္ခဏာ : Solid (ပြောင်)
အရွယ်/အလေးချိန် : Customize
ထုတ်လုပ်သည့်နေရာ : လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ မြန်မာ
ကျွန်ုပ်တို့ မိတ်ဆွေတော်ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးသော အရည်အသွေးအာမခံ ကွန်ကရစ် ကျောက်တိုင်များသည် ရေရှည်အသုံးခံပြီး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာပြီး ပျက်စီးမှုကိုလဲ နှောင့်နှေးစေပါသည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သစ်သားတိုင်များအစား ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်ကို အသုံးပြုသောကြောင့် ရေရည်ခံပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေသည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုမှ ကာကွယ်လျှော့ချပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊အီးလ်မေးမှ တဆင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Mate Swe Taw Concrete Hollow Pole’s Construction and Engineering Group has been sold and distributed of concrete hollow poles in Industrial Zone(7), HlaingTharyar Township, since 2006. \_r\_nMate Swe Taw Co.Ltd was registered under the authority of Myanmar Governments and transformed into Company business type in 2013. Now, They extend manufacturing and producing of concrete hollow poles at Industrial Zone(3), Shwe Pyi Thar Township. We offer high quality, timely completion and safe solutions of projects and we own long and proven execution track record. Our Services are whole-sale distribution of concrete hollow poles all around the country. Delivering of concrete poles directly to customer’s sites and building the poles. Moreover, we do piling, selling of piles and building of apartments and special luxury condominiums.
မိတ်ဆွေတော်ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၆ခုနှစ် မှစ၍ စက်မှုဇုန်(၇)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ကွန်ကရစ်တိုင်စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရွှေပြည်သာတွင် ကွန်ကရစ်တိုင်များတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ ကွန်ကရစ်တိုင်များအား မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူး	ရောင်းချပေးလျှက်ရှိပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဆိုဒ်အရောက်သို့ သယ်ပို့ပေးခြင်း၊ တိုင်များစိုက်ထူပေးခြင်းလုပ်ငန်း	များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် လူနေတိုက်ခန်းများ၊ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီယံ	အဆောက်အဦီးများကို အခန်းပေးအခန်းယူစနစ်ဖြင့် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးသည့်အပြင် ပိုင်တိုင်များ	ရောင်းချခြင်းနှင့် ပိုင်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။	မိတ်ဆွေတော် ကျောက်တိုင်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးမြင့် စံချိန်မီ ကျောက်တိုင်များအား လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ပို့ဆောင် ရောင်းချပေးပြီး လူကြီးမင်းများအား စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ ရရှိစေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
For Concrete column ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်များ
May I get the quotation for "Concrete column ကွန်ကရစ်ကျောက်တိုင်များ " ?